4 Calaamadood Oo Lagu Garto Marka Ninka Uu Ku Naco
Aayaha editorDecember 9, 2018
Shaki makaaga jiraa jacaylka uu kuu qabo ninka? Xaqiiqda ayaa ah marka uu shaki kaasoo galo jacaylka uu kuu qabo ninkaagu in dhibaato ay jirto.
Hoos ka aqriso 4 Calaamadood oo lagu garto in ninka uu ku nacay.
Mid kamid ah calaamadaha muujiya in lamaanahaaga uu ku nacay ayaa ah dhaqankiisa oo noqda midaan joogta ahayn isla markaana isbedela. Maanta waa mid daryeel iyo kalgacayl leh; berrina xittaa ma rabyo inuu ku arko isagoo rajeeya in noloshiisa aad uga baxdo.
Marka lamaanahaaga uu joojiyo in dadaal badan uu ku bixiyo sidii uu xiriirka u shaqeyn lahaa taasi waa tilmaan muujineysaa inuu joojiyay jacaylkii uu kuu qabay.
Lamaanahaaga waxaa macquul ah inuu waqtiyo yar kusoo Waco isla markaana uusan kuu taagneyn markaad xanuunsantahay isla markaana uusan ka jawaabin markaad ixsaan weydiisato.
Lamaanahaaga wuxuu bilaabaa inuu kuu arko sababta ay wax kasta u qaldamaan marka uu joojiyo jacaylkii uu kuu qabay. Wuxuu tan u sameeyo ayaa ah wuxuu isku dayayaa inuu helo sabab uu kaaga tago isagoo doonaya inuu sabab kaaga dhigo burburka guurka.
Lamaanahaaga wuxuu joojin doona inuu ku amaano ama kuu mahadceliyo isagoo mar dhib ah arki doona dadaalkaaga waana calaamad muujineysa inuu ku nacay. Lamaanahaaga intii uu kaaga mahad celi lahaa kuguna amaani lahaa waxyaabaha wanaagsan ee aad sameyso ama dadaalkaaga wuxuu bilaabi doonaa inuu kugu dhaleeceeyo waxyaabihii uu kaaga mahad celi jiray.
Calaamadaha Lagu Garto Marka Lamaanahaaga Runtii Uu Ku Jecelyahay
3 Waxyaabood Raggu Sameeyaan Oo Haweenka Si Daran Uga Careysiiya